Natiijada doorashada mid ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka oo lagu qabtay Dhuusa-Mareeb
​Wasiiru Dowlaha Arrimaha Gudaha Dowlada Federalka Soomaaliya Cabdullahi Faarax Wehliye ayaa ku guuleystay doorashada Kursiga xildhibaanimo ee golaha Shacabka, taasoo Maanta ka dhacday magaalada Dhuusa-mareeb ee gobolka Galgaduud.
Amaanka xarunta Doorashada ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana dhammaan xarunta joogay Ergadii Doorashadda iyadoo ay doorashadu ku socotay si nidaam ah.
Kursigan Xildhibaanimada ee maanta loo taretamayay ayaa waxaa horay uga geeriyooday AUN Xildhibaanada Bootaan Ciise Caalin, waxaana u tartamayay saddex musharax oo kala ahaa C/llaahi Faarax Wehliye, Wasiiru Dowlaha Arrimaha Gudaha ee DFS iyo Maxamed Cilmi Afrax Mideeye iyo sidoo kale Cabdulle Faarax Xirsi.
Cabdullahi Faarax Wehliye ayaa helay codod dhan 28 cod, halka Musharax kale Maxamed Cilmi Afrax Mideeye uu helay 17 cod, Cabdulle Faarax Xirsi ayaa isna helay 3 cod, waxaana xumaaday 3 cod.
Guddiga Doorashooyinka ayaa ku dhawaaqay in uu guulaystay Xildhibaan Cabdullahi Faarax Wehliye Wasiir Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha.
Doorashada mid ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka oo maanta lagu qabanayo Dhuusa-Mareeb
Degmada Dhuusa-mareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug waxaa lagu wadaa in maanta lagu qabto doorashada mid ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka.
Guddiga doorashada madaxa-bannaan ee heer qaran ayaa ku howlanaa qabsoomida doorashada kursiga uu ka geeriyooday Xildhibaan Bootaan Ciise Caalin, waxaana ku tartamaya illaa saddex musharax.
Musharixiinta ku tartameysa kursiga ayaa kala ah Maxamed Cilmi Afrax Mideeye oo horay kursigan ugu soo tartamay looga adkaady iyo C/llaahi Wehliye oo ah wasiir-dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya.
Ergada dooraneysa kurisgan oo ah 51 xubnood ayaa dhawaan la geeyay magaalada Dhuusa-mareeb, waxaana la dejiyay mid ka mid ah xarumihii uu ku howl galayay Madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir.
Doorashadan ayaa haddii dhacdo waxaa ay noqoneysaa kursigii 3aad ee ay qabtaan Guddiga doorashooyinka heer qaran, kuwaasoo horay ugu guuleystay doorashooyinka kuraastii banaanaa ee ka kala dhacay Muqdisho, Jowhar iyo Kismaayo.
Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeedinaya shirka Jaamacadda Carabta ee ka furmay Dammaam
​Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shalay gaaray Magaalada Dammaam ee dalka Sucuudiga ayaa lagu waddaa in uu maanta Khudbad ka jeediyo Shirka 29aad ee madaxda waddamada ku mideysan Ururka Jaamacadda Carabta.
Waxaa lagu waddaa in uu Khudbadiisa diiradda ku saaro horumaradii ugu dambeeyay ee ay sameysay dowladda Soomaaliya.
Kulanka ayaa imanaya xilli ay xoogeysatay xiisadda u dhaxeysa dalalka Soomaaliya dowladda Imaaraadka Carabta, waxaana lagu waddaa in madaxweyne Farmaajo iyo madaxda Imaaraadka ay arintaasi ka hadlaan.
War laga soo saaray shirkii wadatashiga War-faafinta ee lagu soo gabagabeeyay Garoowe
​Waxaa magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyay shirka wadatashiga iskaashiga, mideynta iyo horumarinta warbaahinta dalka, waxaana shirkaa ka qeybgalay Madaxda Wasaaradaha Warfaafinta ee Dowladda Federaalka, Dowladaha xubnaha ka ah dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Bahda Warbaahinta ah waxay ku yeesheen magaalada Garowe ee caasimada dowlad goboleedka Puntland.
Ogaanshaha heerka uu marayo xeerka saxaafadda
Ka qeybgalaashu, waxay Isla garteen in guddigan ay magacaabaan Wasiirada Wasaaradaha.
Ka qeybgalayaashu, waxaa ay isla qireen baahida loo qabo in kor loo qaado, lana dhiiriagaliyo wadashaqaynta ka dhaxeysa Warbaahinta Qaranka ee Heer Federaal iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoo xoogga la saarayo xog isdhaafsiga, kala faaiidaysiga, wadaagista Imkaaniyaadka iyo wixii la mid ah, iyadoo lagu ammaanay Agaasimayaasha Tv-yada, in ay bilaabeen dhaqangalinta heshiiskii sanadkii hore.
Ka Qeybgalayaashu, waxay u mahad celiyeen Guddiga Saxaafadda ee Golaha Shacabka oo sheegay in ay warbaahinta u soo bandhigi donaan xeerka saxaafadda inta aan aqrinta labaad loo gudbin.
Reer galbeedka oo baaraya hubka kiimikada ah ee la sheegay in ay isticmaashay Suuriya
Dalalka Mareykanka,Faransiiska iyo Britain ayaa billaabay isku day cusub oo ay ku doonayaan in baaritaan madax-bannaan lagu sameeyo eedeymaha ah in dowladda Suuriya ay isticmaaleyso hubka kiimikada.
Saddexdan dal oo habeen hore weerar ku qaaday bartilmaameedyo ku yaalla Suuriya ayaa golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey u qeybiyay qaraar qabyo qoraal ah oo ay ku doonayaan in muddo bil gudaheeda ay kooxda caalamiga ah ee xakameynta hubka kiimikada ay warbixin ka soo saarto eedeymahaasi.
Mareykanka ayaa kal hore ku hanjabay in uu duqeymo dheeraad ah ku qaadi doono gudaha dalka Suuriya, haddii xukuumadda madaxweyne Asad ay sii waddo in ay adeegsato hubka kiimikada ah.
Fallaagadii ugu dambeysay ayaa basas uga baxay magaalada Duuma, iyagoo ku sii wajahan dhanka woqooyiga dalkaasi Suuriya
Ra’iisal wasaare Kheyre oo la kulmay mas’uuliyiinta gobolka Banaadir iyo saraakiisha ciidamada
Ra’iisal wasaaraha ayaa sheegay in Xukuumadda ay ku dadaali doonto taageerida laamaha Ammaanka, waxaana uu ku boggaadiyey shaqada adag ee Habeen iyo maalin ay u hayaan Ummadda Soomaaliyeed.
Diyaaradii Imaaraadka ee lagu xayiray Boosaaso oo la fasaxay
Wararkii ugu danbeeyay ee ka imanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegaya in la fasaxay diyaaradii laga lahaa Isku-tagga Imaaraadka Carabta, madaama lagu xayiray garoonka.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in diyaaradan ay ka qaaday magaalada Boosaaso macalimiin tababaraysay ciidamada Badda ee maamulka Punland kadib markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
Khilaaf soo kala dhaxgalay saraakiishii la soctay diyaarada iyo Ilaalada garoonka ayaa sababtay in saacado diyaarada lagu xayiro halkaa.
Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in tababarayaasha ay ugu dambeyntii oggolaadeen in la baaro boorsooyinka ay wateen ayna reebaan hub ay siteen.
Sidoo kale waxaa wararka ay sheegayaan in loo diiday markab sitey calanka Imaaraadka Carabta in uu hub ka qaado dekeda, waxaana socda wada hadalo arrintan lagu xalinayo.
Arrintan ayaa muujineysa heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta, kaddib markii sidan oo kale todobaadkii hore dowladda Soomaaliya ku qabtay garoonka Aadan Cadde diyaarad laga lahaa Imaaraadka oo sida malaayiin dollar.
Khilaaf ka jira xisbiga WADANI iyo xoghayihii guud ee xisbigaasi oo xilkii laga qaaday
​Xisbiga mucaaradka ah ee WADANI ayaa waxa maalmahan ka dhex jiray khilaaf u dhexeeya gudoomiyaha iyo xoghayaha guud ee xisbigaasi.
Xoghayaha guud ee xisbiga WADANI Maxamed Uur-cade ayaa eeddo u soo jeediyey gudoomiyaha xisbiga WADANI, waxaanu sheegay in loo baahan yaha isbedel ku dhaca xisbiga si doorashooyinka soo socda guul u gaadho, taasina waxay keentay in uu khilaafkii cirka isku shareero.
Guddida fulinta ee xisbiga WADDANI oo uu hogaaminayey gudoomiye Cirro ayaa maanta shir degdeg ah iskugu yimid, waxaanay xilkii iyo xubinimadii xisbigaba ka saareen xoghayaha guud ee xisbiga Maxamed Uur-Cadde.
“Xoghayaha guud ee xisbiga Uur-cade wuxuu isku direy deegaanno iyo xisbiga, iyo siyaasiyiin iyo xisbiga, waxaa kale oo aad ka war qabteen in go’aamo uu ka soo saaray xisbiga arrintii saldhiga Militari ee Imaaraadka uu ka hor yimid, xoghayaha guud wuxuu jabiyey xeerkii xisbiga, waxaanu dadafeeyey go’aamadii guddida fulinta, waxaanay dood dheer ka dib cod gacan taag ah xilkii kaga qaadeen xoghayihi xisbiga Maxamed Cabdilaahi Uurcade”ayuu yiri gudoomiyihii xisbiga C/raxmaan Cirro.
Khilaafkan ayaa ka dhashay ka dib markii gudoomiye Cirro uu xoghayaha usoo jeediyey inuu xilka ku wareejiyey masuul kale, haseyeeshee uu xoghayuhuna ka hor yimid inuu xilka wareejo, maadaama oo uu ku dooday in golaha dhexe lagu doortay ay xilka ka qaadi karaan.
Wasiirka arrimaha dibeda oo la kulmay xoghayaha Ururka Jaamacada Carabta
​Wasiirka Arrimaha dibada dowlada Federalka Soomaaliyae Axmed Ciise Cawad ayaa maanta kula kulmay Dalka Boqortooyada Sacuudiga Xog-hayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta Axmed Abul Qeyd.
Kulanka labada mas'uul ayaa la sheegay in looga hadlayay horumarada Dowladda Soomaaliya ay ka sameysay dhinacyada Siyaasadda, Amniga, Dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka.
Mudane Axmed Ciise Cawad Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta Axmed Abul Qeyd warbixin ka siiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya.
Mr Axmed Abul Qeyd xoghayaha Guud ee Ururka Jaamacadda Carabta ayaa dhankiisa bogaadiyey horumarada iyo dadaalada ay wado Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxuuna intaasi ku daray in Jaamacadda Carabta ay mar waliba garab taagan tahay Soomaaliya, islamarkaana ay gacan ka geysaneyso dib usoo celinta nabadda iyo Xasiloonida Soomaaliya.
Ururka Jaamacadda Carabta ayaa shaaciyay in si gaar ah Hay’adaha amaanka Soomaaliya lagala shaqeyn doon dhinaca sugidda amaanka iyagoona sidoo kale sheegay in deeq bixiyeyaasha Caalamiga ah ay kala hadli doonaan sidii gar gaar loo gaarsiin Soomaaliya.
Dhanka kale Ururka Jaamacadda Carabta ayaa balan qaaday in Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay kala shaqeyn doonaan dhinaca Doorashooyinka islamarkaana kormeerayaal ka socda Ururka Jaamacadda Carabta ay imaan doonaan Soomaaliya.
Diyaarad laga leeyahay Imaaraadka oo lagu xayiray magaalada Boosaaso
​Wararka xiligan naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in ciidamada ilaalada garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso halkaa ku xayireen diyaarad laga leeyahay dalka Iskutaga Imaaraadka Carabta.
Dad ku sugan Boosaaso ayaa warbahainta u sheegay in loo diiday diyaaradaha in ay ka duusho garoonka kaddib markii ay diideen saraakiishii la soctay diyaarada in la baaro ka hor inta aysan duulin.
Warka arintan ku saabsan waxaa warbaahinta u xaqiijiyay qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso.
Is afgaranwaa ayaa dhex maray ilaalada garoonka iyo dadkii raaci lahaa diyaarada waxaana weli xayiran diyaaradaasi kadib markii ay ka madax adegyeen saraakiisha imaaraadka carabta in la baaro boorsooyinka iyo waxyaalaha kale ee ay wateen.
Ma jiro illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ee la xiriira xayiraada diyaaradan loo geystey.
Tallaabadan ay qaadeen ciidamada ilaalada garoonka diyaaradaha Boosaas ayaa imanaya xili Axadii ina dhaaftay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho lagu qabtay diyaarad siday lacag dhan $ 9 milyan iyo 600 oo Kun oo dollar oo ka timid dalka iskutaga Imaaraadka Carabta.
Madaxweyne Farmaajo oo u dhoofay dalka Saudi Arabia
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saakay u ambabaxay magaaladda Dammaam ee dalka Sucuudiga, halkaas oo uu ka furmi doono Shirka 29-aad ee Madaxda waddamada ku mideysan Ururka Jaamacadda Carabta.
“Madaxweyne Farmaajo waxa uu khudbad ka jeedin doonaa shirka, isagoona Madaxda kale ee waddamada Carabta la wadaagi doona xaaladaha siyaasadda, ammaanka iyo horumarka ka socda dalka” ayuu yiri Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Axmed.
Horrey waxaa ugu sugnaa dalka Sucuudiga wafdi uu hoggaaminayay Wasiirka arrimaha dibadad Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo hordhac u ahaa wafdiga Madaxweynaha, sidoo kalana ka qeyb galayay shir wasiirrada arrimaha dibadda ee Jaamacadda carabta oo khamiistii ka furmay magaalada Riyaad, laguna qorsheynayey ciwaannada Shirka 29aad ee Madaxweynayaasha.
Madaxweyne Farmaajo ayaa inta shirkan uu socdo waxa uu shir-doceedyo la yeelan doona madaxda qaar ee shirka ka qeybgalaya, iyagoona ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka, iskaashiga iyo danaha guud ee kala dhaxeeya dalalkaas Soomaaliya.
WAR DEG DEG AH : Mareykanka iyo xulafadiisa oo weeraray Suuriya
​ Dalalka Mareykanka, Fransiiska iyo Britain ayaa duqeymo ay kaga jawaabayaan sunta la sheegay in dowladda Suuriya ay adeegsatay ka fuliyay gudaha dalka Suuriya.
Qarax aad u weyn ayaa laga maqlay caasimadda Dimishiq ee dalka Suuriya, waxaana sidoo kale la arkay uuro iyo qaac ka baxaya halka uu weerarka ka dhacay.
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay weerarka, waxaana Trump uu intaa raaciyay in Mareykanka iyo xulafadiisa ay horay ugu diyaar garoobeen ficil ka dhan ah dowladda Suuriya, si loo joojiyo hubka kiimikada ee la sheegay inay adeegsatay.
Trump waxaa kale oo uu edeeyay dowladda Ruushka oo uu sheegay inay ku guuldareysatay inay ka soo baxdo ballankii ay qaaday sannadkii 2013-ka, kaasi oo ahaa inay burburiso hubka kiimikada ee Suuriya.
Ra’iisal wasaaraha Britain Theresa May oo iyaduna ka hadashay weerarka ayaa sheegtay in weerarada ay ka fuliyeen gudaha dalka Suuriya ay ahayeen kuwa qorsheysnaa oo loogu talo galay in aysan sii hurinin xiisadda gobolka, waxaana ay intaa ku dartay inay iska ilaaliyeen waxwalbo waxyeleyn kara dadka rayidka.
Sidoo kale weerarka waxaa ka hadlay madaxweynaha Fransiiska, Emmanuel Macron oo sheegay in weerarda ay ahaayeen kuwa looga hortagayo in dowladda madaxweyne Bashar Al-Asad aysan adeegsanin hubka kiimikada.
Shirweynaha caalamiga ah ee Suufiyada oo lagu soo gabagabeeyay Muqdisho
​Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Caasimadda Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa sheegay in marti gelinta shirka weynaha caalamiga ah ee Culummada Suufiyada oo lagu qabtay magaalada Muqdisho uu muujinayo kaalinta muhiimka ah ay u leedahay caalamka iyo sida loogu sii kalsoonaanayo.
Guddoomiyaha oo booqday Xarunta Macalin Nuur ee Magaalada Muqdisho oo marti gelisay culumada ka qeyb galay shir weynaha 7aad ee Suufiyada Caalamka ayaa sheegay in ay laf dhabar u yihiin dadaallada dib u dhiska dalka iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada Alshabaab.
“Magaalada Muqdisho in ay marti geliso culimmo ka socota dhowr iyo toban dal waxa ay tilmaan u tahay hor u socodkeenna iyo sida ay inoo ka go’antaahy in aan soo ceshanno kaalinta iyo maqaaamka aan ka joognay magaalooyinka kale ee Caalamka.”
Guddoomiyaha Gobolka ayaa booqashada kaddib waxa uu caawa casho sharaf u sameeyey Guddiga qaban qaabada Shirka 7aad ee Suufiyada iyo dhammaan culummadii ka qeyb gashay, isagoona kula dar daarmay in ay dar dar geliyaan dadaallada ay ku bixinayaan iftiiminta khatarta xagjirnimada iyo sida ay u marin habaabeen argagixisada Alshabaab.
“Dadka Soomaaliyeed aad ayey ugu nugul yihiin culamu-diinkooda, sidaas darteed waxaan rabnaa in aad xoojisaan kaalinta aad ku leedihiin baahinta amniga iyo nabadeynta bulshada oo labaduba udub dhexaad u ah tilmaamaha shareecada Islaamka iyo waajibaadka ina saaran.”
Casho sharafta loo sameeyey culummada ka qeyb gashay shir weynaha Suufiyada waxaa ka qeyb galay Wasiiru Dolwaha Madaxtooyada Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Macalin Nuur, Xeer Ilaaliyaha Qaranka Mudane Axmed Cali Daahir, Taliyaha Ciidanka Asluubta Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac, Guddoomiyaha Majmaca Culumada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo masuuliyiin kale oo heer Gobol iyo heer Federaal ah.
Qatar oo si adag u cambaareysay Qaraxii degmada Baraawe
​War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa si kulul loogu cambaareeyay Qarixii ka dhacay Garoon Kubadda lagu cayaaro oo ku yaalla Magaalada Baraawe ee Caasimadda maamulka Koonfur Galbeed.
Dowladda Qatar ayaa sidoo kale, sheegtay in ay gebi ahaan ka soo hor jeedo beegsiga goobaha dadweynaha iyo in dadweynaha la cabsi geliyo, waxayna tacsi u dirtay dowladda Soomaaliya iyo qoysaska dadkii ku waxyeeloobay qaraxaas.
Al-shabaab ayaa qarax miino oo ay ku aaseen garoon kubada cagta lagu cayaaro waxa ay ku dileen ilaa Afar qof, halka ay ku dhaawaceen tiro intaas ka badan, kuwaasi oo u badnaa dhalinyaro.
Laakiin dhinacooda waxaa ay sheegeen in weerarkaasi ka dhacay Baraawe ku dileen Askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya.
Xildhibaannada Baarlamaanka oo ku kala aragti duwan cida u tartami karta Kursiga guddoonka Golaha Shacabka
​Inkastoo laga faraxashay khilaaf siyaasadeedkii ka dhashay mooshinkii laga keenay guddoomiyihii xilka iska casilay Prof Maxamed Cismaan Jawaari, mar kale baarlamaanka Soomaaliya ayaa wajahaya khilaaf ka abuurmaya qodob sharciyeedka ah cida u tartami karta xilka guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in marka la eego habka ay ku dhisan tahay dowladda ee 4.5 in kaliya kursigan u tartami karaan xildhibaannada ku abtirsada beesha uu ka soo jeedo guddoomiyihii is casilay Prof Jawaari, isaga oo meesha ka saaray in cid waliba isku soo taagi karto qabashada xilka guddoomiyaha Golaha Shacabka.
‘’Waad og-tihiin Hirshabeelle markii madaxweynaha la dooranayay waxaa la yiri ‘’Reer Hebel’’ oo kaliya ayaa u tartami kara iyadoo la fiiranayo habka awood-qeybsiga sidaa daraadeed doorashada guddoomiyaha Golaha Shacabka ma’aha mid u furan xildhibaan kasta , laakiin waxaa u tartami kara oo kaliya beesha uu ka soo jeedo guddoomiyaha xilka ka degay’’ ayuu yiri Prof Jawaari.
Laakiin aragti taa ka duwan waxaa qaba xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo sheegay in musharax kasta oo buuxiya sharuudaha laga rabo in uu u furan yahay qabashada xilka guddoomiyaha Baarlamaanka iyadoo aan loo eegin beesha uu ka soo jeedo, waxaana uu arin sharci darro ah ku tilmaamay in beel kaliya sida uu hadalka u dhigay lagu calaamadiyo in ay isku soo taagto guddoonka Golaha Shacabka.
‘’Dastuurkeenu kuma qorna in xilalka lagu qeybsado 4.5 iyo qabiil, laakiiin wuxuu iska ahaa heshiis ama is faham guud oo aan sharci ku dhisneyn, sidaa daraadeed doorashada guddoonka Baarlamaanka waxey u furan tahay cid kasta oo soo buuxisa sharuudaha laga rabo''ayuu yiri xildhibaan Mahad Salaad
Labadan aragti oo ay kala qabaan labada xildhibaan ee ka wada tirsan Golaha Shacabka ayaa hadda ah sheekada ugu xiisaha badan marka la eego loolanka siyaasadeed ka dhax jira Baarlamaanka Soomaaliya.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in xildhibaanno ka tirsan garabkii sida weyn u taageeray Prof Jawaari qorsheynayaan in ay isku soo taagaan qabashada xilka guddoomiyaha Golaha Shacabka kuwaa oo marka awood qeybsiga beelaha ee dowladda Soomaaliya ku dhisan tahay la eego ku heyb noqonaya ra’iisal wasaare Kheyre.
Ilaa iyo hadda musharixiinta cadeeyay hankooda ah qabashada xilka guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa ka soo jeeda dhamaantood maamulka Koonfur Galbeed kuwaa oo loo arko in ay iyagu leeyihiin buuxinta kursiga uu banneeyay Jawaari.
Balse dagaal siyaasadeedka socda awgii ayaa laga yabaa in ay jirin karaan xildhibaanno kale oo maalmaha soo socda shaacin doona musharaxnimadooda kuwaa qaar ka mid ah durbaba siweyn dadku u hadal hayaan.
Mareykanka oo duqeyn ka fuliyay dulleedka Kismaayo
​Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka ayaa Arbacadii ina dhaaftay duqeyn la beegsaday saldhig ururka Al-shabaab ay ku leeyihiin waqooyi galbeed ee magaalada Kismaayo, meel u dhaw deegaanka Jannaay Cabdalle.
War ka soo baxay Taliska Mareykanka ee AFRICOM ayaa waxaa lagu sheegay in Duqeyntan si gaar ah loola beegsaday gaari miineysan oo xubno Shabaab ka tirsan ay saarnaayeen.
Mareykanka qoraalkiisa kuma aanu sheegin khasaare nafeed oo ururka Al-shabaab ay ku gaarsiiyeen Duqeyntan, balse wuxuu tilmaamay in uu burburiyay gaariga walxaha qarxa lagu soo raray.
Taliska Mareykanka AFRICOM ayaa sidoo kale sheegay duqeyntan oo dhacday 11-kii bishan April in ay iskaashi kala sameeyeen dowladda federaalka, kadibna ay fuliyeen.
Waa duqyantii 12-aad ee Maraykanku sannadkan ka gaystaan gudaha Soomaaliya taasi oo bartilmaameeedsatay ururka Al-shabaab.
Madaxweyne Waare oo guddoomiye cusub u magacaabay gobolka Hiiraan
​Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo maalmihii ugu danbeeyayba sugnaa magaalada Beledweyne ayaa xilkii ka qaaday guddoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan, waxaana xilka guddoomiyaha gobolka loo magacaabay Cabdullaahi Axmed Maalin Sufurow.
Guddoomiyaha xilka laga qaaday Cali Jeyte Cismaan ayaa labo jeer soo noqday guddoomiyaha gobolka Hiiraan, waxaana markii ugu horeysay guddoomiyaha gobolka u magacaabay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo laakiin markii danbe xilka ka qaaday, hasse ahaatee waxaa mar kale dib u soo magacaabay madaxweyne Waare.
Wareegtada magacaabista guddoomiyaha cusub :
Wasaaradda Amniga Soomaaliya oo sheegtay in isbadal lagu sameeyay qorshaha sugida Amniga caasimada
​Wasaaradda Amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in isbedel lagu sameeyay qorshaha amniga guud Magaalada Muqdisho..
Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow Ducaalle ayaa waxa uu sheegay isbedelka la sameeyay in uu yahay in la furay wadooyinkii xiran magaalada ciidamada xasilintana ay hada ku sugan yihiin Waddada Warshadaha ee Magaalada.
Ciidamada ammaanka ayuu faray in shacabka Soomaaliyeed ay si wanaagsan ula dhaqmaan, maadaama ay u adeegaan shacabka, taas bedelkeeda ayuu shacaba ka dalbaday in ay si dhaw ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka.
“Jidadkii xirnaa sida jidka Wadnaha waan furnay, ilaa jidka Warshadaha ayaan geynay, waan sikinay, shacabka waxaan uga mahad-celinaa dulqaadka ay inoo muujiyeen waxaan ka dalbanayaa in ay si dhaw ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka, sidoo kale ciidamada waxaan farayaa in ay u dhimriyaan shacabka” ayuu yiri wasiirka Amniga.
Labadii cisho ee la soo dhaafay gadiidleyda iyo bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaa ay nafiseen ciriirigii badnaa ee ka jira magaalada kaddib markii inta badan leysku furay jidadka caasimada, meeshana laga saaray culeyskii badnaa oo ay kala kulmi jireen baaritaannada.
Madaxweyne Farmaajo oo si adag u cambaareeyay Qaraxii degmada Baraawe
Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si adag u cambaareeyay Qaraxii galinkii danbe ee shalay lala eegtay dhalinyaro kubad ku cayaareysa garoon ku yaala degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muujiyay sida uu uga xun yahay qarixaasi oo ay ku dhinteen dhallinyaro ku sugnaa garoon lagu ciyaaro kubadda cagta oo ku yaala degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Madaxweynaha ayaa ku tilmaamay Al-shabaab cadawga kaliya oo ay leeyihiin umadda Soomaaliyeed, loona baahan yahay sida uu hadalka u dhigay in dowlad iyo shacab laga wada qeyb qaato sidii loo wiiqi lahaa.
Madaxweynaha ayaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday falkii bahalnimada ahaa ee ka dhacay degmada Baraawe, isaga oo Alle uga baryaya dhaawacana in uu caafimaad degdeg ah siiyo.
Uganda oo canshuur ka qaadeysa dadka xanta iyo dacaayada u isticmaala baraha bulshada
Dowladda Uganda ayaa qorsheyneysa in ay canshuur maalinle ah ka qaado dadka isticmaala baraha bulshada wixii loo gaaro July, si sare loogu qaado dakhliga, sida uu sheegay Wasiirka Dhaqaalaha dalkaasi Matia Kasaija.
Talaabadan ayaa waxaa cambaareeyay mid ka mid ah dadka xuquuqda u dooda oo lagu magacaabo Rosebell Kagumire oo yiri: "Waxay qayb ka tahay iskudayada ballaaran ee lagu wiiqayo xorriyatul-qowlka."
Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa horraantii bishan warqad uu u diray Kasaija iyo saraakiil kale ku sheegay in dadka xanta u isticmaala baraha bulshada ay tahay in canshuur lagu soo rogo.
"Kuma soo rogayo canshuur dadka u isticmaala baraha bulshada sababo waxbarasho, baaritaan ama tixraac ..kuwaasi bilaash bey sii ahaanayaan," ayuu yiri madaxweynuhu.
Dadka isticmaala WhatsApp, Facebook iyo Twitter ayay canshuurtani saameyn doontaa.
Waa markii ugu horeysay oo dowlad ku dhawaaqdo in canshuur laga qaadayo qeyb ahaan dadka isticmaala baraha bulshada taasoo ay siweyn uga xumaadeen dadka reer Uganda ee iyagu ku tixan isticmaalka baraha bulshada oo hadda ah Aalad awood badan oo wararka leysku dhaafsado.
Qarax dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay garoon Kubadda lagu cayaaro degmada Baraawe
​Wararka naga soo gaaraya degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ilaa afar dhalinyaro ah ay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabnimadii maanta oo Khamiis ah ka dhacay garoon Kubadda lagu cayaaro.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu asiibay dhalinyaro Kubadda ku cayaareysay meel garoon ah, waxaana la sheegay in cayaartan aheyd Semi-Finalka cayaaro degamada ka socday oo ay isku arkayeen kooxo lagu kala magacaabo Elman iyo SYL.
Guddoomiye ku-xigeenka Gobolka Shabeellaha Hoose C/fataax Xaaji Cabdulle ayaa sheegay qaraxan inay ku dhinteen afar qof, sidoo kalena ay dhaawacmeen dad ku dhaw 10 kale, kuwaasoo la dhigay Isbitaalada Magaalada.
Wuxuu sheegay Qaraxan inay ka dambeeyaan ururka Al-Shabaab, isaga oo intaa raaciyay in Hay’adaha ammaanka ay ku daba jiraan raggii falkan ka dambeeyay, ayna rajeynayaan inay gacanta ku soo dhigaan.
Dadka qaraxa ku wax-yeeloobay ayaa waxa ay u badan yihiin dhalinyaro xilligaasi daawaneysay ciyaar kubada cagta ah.
Jawaari oo ka hadlay waxa ku kalifay in uu xilka guddoonka Golaha Shacabka iska casilo
​Is-mariwaa siyaasadeed oo jiitamayay ku dhawaad Bil kaddib ayuu ugu danbeyntii guddoomiyihii Golaha Shacabka Prof Maxamed Cismaan Jawaari waxaa uu maanta golaha Baarlamaanka ka hor jeediyay khudbadiisii sagootinta, isaga oo faah faahin dheeraad ah ka bixiyay waxa ku kalifay in uu tallaabadan qaado.
Akhriso Nuxurka sababta keentay in Jawaari uu xilka ka dego.
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeybgalay xuska Aas-aaskii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed
​ Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray Saraakiisha, Saraakiil-Xigeennada, Aliflayda, Dableyda iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka iyo qooysaskooda oo maanta ay ku beegantahay sannad guuradii 58-aad ee ka soo wareegtay markii la asaasay.
Madaxweynaha oo kala qeybgalay munaasabadda xuska maalintan cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga ayaa sheegay in si dardar leh ay u socdaan howlaha dib u dhiska ciidanka, tallaabooyin muuqdana loo qaaday isku dhafka ciidammada, dib u habeynta hannaanka maaliyadda iyo howl-gelinta.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in dadaalladaas dib u dhiska ah ay barbar socdaan guulo ay ciidanku ka gareen dagaalka lagaga sifeynayo dalka argagixisada Al-shabaab.
“Muddadii ugu danbeysay ee aan ku shaqeynaayey Wasaaradadda Gaashaandhigga, waxaan ku guuleysannay in aan dib u saxano diiwaan gelinta dhammaan askarta, iyadoona loo sameyeeyey mid kasta fayl u gaar ah oo ay ku qoronatahay xog kasta oo ku saabsan askarigaas, taas oo aan horey u jirin.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in lagu kordhinayo qeybaha ciidamada xooga dalka cutubyo ku takhasusay dagaalka melayshiyaadka, taas oo ka tarjumaysa qorshaha dowladda ee ku aaddan xoreynta deegaannada ay gacanta ku hayaan argagixisada Alshabaab.
Madaxweynaha ayaa faray ciidamada xoogga dalka in ay tusaale wanaagsan u noqdaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciribtirka musuqmaasuqa iyo qabyaaladda oo labaduba dib dhigay dowladnimada iyo horumarka dalka.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay dowladaha iyo ururrada caalamiga ee garab taagan Ciidanka Xoogga Dalka, isagoona ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay taageero buuxda siiyaan ciidankooda, dadaal muuqdana ay ku bixiyaan xoreeynta dalka.
Munaasabada ayaa waxaa sidoo kale ka qeybgalay Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh, Xubno ka tirsan labada Gole ee Baarlmaanka, Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Jeneraal Cabdiweli Jaamac Xuseen (Gorod), Taliyaha Ciidanka Asluubta Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac, Taliyaha Ciidanka Booliska Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed, Taliyaha Ciidanka Nabad Sugidda Mudane Xuseen Cismaan Xuseen iyo qaar ka mid ah Danjirayaasha ka hawl galo dalka.
Agaasimihii guud ee wasaaradda Qorsheynta Somaliland oo is casilay
​ Agaasimihii guud ee wasaaradda Qorsheynta horumarinta Somaliland Prof:Cabdi Cali Jaamac ayaa iska casilay xilkii wasaaradaasi ka dib markii ay khilaafeen wasiirkiisa.
Agaasimaha is casilay ayaa sheegay in madaxweynuhu telefoon ku canaantay ka dib markii wasiirku war khaldan u gudbiyey ka dibna uu madaxweynihii uu arki waayey si uu iskaga difaaco eedda loo soo
Mar uu sharaxayey sababta uu isku casilay waxa uu yidhi “Waxan garawsaday in aad xaq u leedihiin in aan erayo kooban idinku sheego sababta aan xilka uga tegay, taasoo ah sidan soo socota:
Madaxweynaha ayaa telefoon igula soo hadlay sabtidii; wuxu igu yidhi hadal macnihiisu yahay (not literally) ha u mareexaanayn wasiirka!!! taas waynu isku dilaynaa!!! Markii aan ku idhi madaxweyne aan kuu imaaddo oo aan is difaacana wuxu yidhi laba cisho iga maqnaw, markaa shalay oo arbaca ah ayaan tegay. Waxana la ii sheegay in aanay ballani ii oolin.”
Waxaanu intaas raaciyey “ Haddaba, shaqaalaha iyo dadka wasaaradduba way sheegi xaqiiqada jirta ee anigu ma garanayo meel qawl iyo ficil midna aan ugu mareexaaneeyay wasiirka, kumana jirto qiyamkayga, dadnimdayda iyo damiirkayga in aan ku dhaqmo sifooyin ceynkaas ah.
Haddaba haddii Madaxeynuhu aaminsan yahay in dhaqankaasi aanu fiicnayn; Haddii aniguna aanan ku sifoobin dhaqankaas oo la ii waayo qawl iyo ficil aan ku mareexaanaynayo; ninka ashkatooday oo wasiirka ahi haddii isna uu aaminsan yahay in dhaqankani xun yahay oo uu ka dhiidhiyay ,markaa su'aasha jawaabta u baahani waxa weeyaan: yaa run sheegaya oo neceb dhaqankan?!!!!! ”.
Agaasimaha is casilay ayaa sheegay in madaxweynuhu ku canaantay in aanu wasiirka u isticmaalin shaadhkiisa oo uu shaqadiisa ku ekaado, haseyeeshee agaasimuhu wuxuu xusay in aanu dhaqan u lahayn inuu adeegsado awood aanu isagu lahayn, sidaas darteed mar hadii arrintaasi lagu edeeyey uu xilkii uu hayey iska casilay.